Xuska Sanadguurada 34 ee JWXO oo Dhagaxlay Lagu Qabtay. | ogaden24
Aug 17, 2018 - Aragtiyood
Maanta oo Khamiis ah taariikhduna ay kubeegantahay 16/8/18 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay laga xusay sanadguuradii 34 aad ee kasoo wareegtay aas-aaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya JWXO.
Xaflada ayaa furantay abaare 10:00am subaxnimo xiliga bariga Africa, waxaana xaflada sooqabanqaabiyay faraca Midnimo ee kahowl gala xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab.
Xaflada ayaa sidii caadiga ahayd lagu furay aayadihii qur’aanka kariimka ahaa iyo wacdi diini ah oo dadkii xaflada sooxaadiray qiiro galiyay waxaana muxaadarada maanta diirada lagu saaray samirka iyo sidaan loogu khasaarin.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Hogaanka Dhaqaalaha ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya Drs Cibaado Xirsi Mahad, oo khadka isgaadhsiinta kaga sooqayb gashay waxayna marwo Cibaado dadwaynaha uga xogwarantay marxalada aan kujiro iyo sida ay lagama maarmaan utahay in aan lajaanqaadno isbadalada kasocda geeska Africa.
Halganto Marwo Cibaado ayaa dadwaynaha kajaahil tirtay JWXO iyo waxa uga qorshaysan isbadalada waxayna sheegtay in JWXO aysan kaleexanin mabaadiidii iyo hadafkii shacabka ee ahaa aayo katashiga.
Sidoo kale waxaa xaflada laga akhriyay taariikhda Ogaadeeniya oo kooban waxayna dadwaynuhu siwayn uga dhargeen taariikhda dalkooda iyo sooyaalkiisii.
Intaas kadib waxaa lagu soodhaweeyay kooxda Hilaac oo kamid ah kooxfaneedyada Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya JWXO, kuwaas oo dadwaynihii dhiigooda kiciyay waxayna kooxda Hilaac soobandhigtay suugaan lajaanqaadaysa xiliga lagu jiro.
Intaas kadib waxaa madasha kahadlay odayaal aad ubadan oo Soomaaliyeed iyo waliba qaar kamid ah aqoonyahan ka soomaaliyeed.
Xaflada maanta oo aad loosoo qorsheeyay waxaa kasoo qayb galay saxaafada afka soomaaliga kuhadasha kuwaas oo isugu jiray TV-yo iyo waliba ideecado.
Guntii iyo gunaanadkii xafladan oo loogu magacdaray Sanadguuradii Xoriyada ayaa kusoodhamaatay si nabadgaliyo ah Isla markaana quruxbadan.